आवरण« मायाको भाषा भौ–भौ - समसामयिक - नेपाल
नासिर खान आश्रित कुकुरसँग ढल्कु, काठमाडौँ
मंगलबजारमा खैरो कुकुरमाथि कसैले एसिड प्रहार गर्‍यो, तीन महिनाअघि । एसिडले कुकुरको ढाडको छाला जलेको थियो । चोभारस्थित एनिमल नेपालले उद्धार गरेर अहिले आफ्नै सेल्टरमा उपचार गरिरहेको छ । दुई साताअगाडि सातदोबाटोमा छातीदेखि फोक्सोसम्म चिरिएको कुकुर फेला पर्‍यो । यस्तै, डेढ वर्षअघि महँगो प्रजातिको बक्सर कुकुर शरीरमा ट्युमरसहित बालुवाटारमा भेटिएको थियो । कुकुर चाहे विदेशी प्रजाति (ब्रिड) हुन्, चाहे स्थानीय जातका, बारम्बार शोषणको सिकार भइरहेका छन् ।
एसिड मात्र होइन, तातोपानी खन्याएर, पिटेर, गाडीले ठोकेर, विष खुवाएर र किर्ना लागेर मर्नु नेपालका अधिकांश सडकमा छाडिएका कुकुरको नियति हो । काठमाडौँ महानगरपालिकाका अनुसार उपत्यकामा मात्रै करिब ४० हजार कुकुर रहेको अनुमान छ । गाडीले हानेर कुकुर घाइते भएका घटना एनिमल नेपालमा बढी आउने गरेका छन् । मानिस संवेदनशील नहुँदा कुकुर प्रताडित हुने गरेको एनिमल नेपालका पशु प्राविधिक सुशान्त आचार्य बताउँछन् । भन्छन्, “उमेर बढी र रोगग्रस्त भएपछि कुकुरलाई सडकमा बेवारिसे छाडिदिन्छन् । गाडी गुडाउनेले पनि खासै ध्यान दिँदैनन् । दुर्घटनाकै कारण धेरै कुकुर मर्ने गरेका छन् ।”
जहाँ कुकुरलाई पिटेको, दुःख दिएको मात्र देखिन्छ, त्यहीँ आफ्नै सन्तानसरह पाल्नेको पनि कमी छैन । उन्नत प्रजातिका कुकुर त सबैले पाल्न खोज्छन् तर सडकमा छाडेकालाई छोराछोरीझैँ पाल्नु चानचुने होइन । कुकुरलाई छोराछोरीसरह पाल्नेमा पर्छन्, नासिर खान, ५८ ।
ढल्कुचोकबाट देब्रेतर्फ लागेपछि करिब ५ सय मिटरभित्र ५ तले अग्लो घर छ । त्यही घरको भुइँतलामा बस्छन्, नासिर खान, ७ कुकुरका साथ । घरभाडा र खाना खर्च ६ वर्षदेखि कतारमा रहेका छोराले हेर्छन् भने कुकुरको खानाको जोहो उनैले गर्छन् ।
०७२ को भूकम्पअघि नासिरसँग जम्मा ५ वटा मात्र कुकुर थिए । उनी टोलका अन्य कुकुरसहित दैनिक १९ लाई दुई समय खाना खुवाउँछन् । ३ किलो किमामा आधा किलो चोक्टा मासु मिसाउँछन् । नासिरलाई सेतो भात मन पर्दैन, कुकुरलाई पनि बेसार हालेको भात र मासु मुछेर खुवाउँछन् । उनले कुकुरका लागि ३ वटा फलामे घर बनाएका छन् । घरधनीले केही भन्दैनन् त ? भन्छन् “ वर्ष भयो, कुकुरका कारण मेरो बोलचालै छैन । घरभाडा श्रीमतीले दिन्छिन् । घरभरि केटा मान्छे कोही छैन । घरको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी मैले लिएकाले सरेर जाऊ भन्न सकेका छैनन् ।”
नासिर विपद्मा परेकालाई सहयोग गर्छन्, रेडियोमा जनचासोबारे बोल्छन् । कुकुरलाई दैनिक खुवाउँछन् र घाइते कुकुरको उपचारमा खट्छन् । नासिरको ठूलो झोलामा सदैव कुकुरलाई चाहिने पूरै औषधी हुन्छन् । उनी डाक्टर त होइनन् तर कुकुरलाई चाहिने सामान्य औषधी, मलमपट्टी आफैँ गरिदिन्छन् । सिलाइ पेसाका उनी सिजनमा पर्यटकका लुगा तयार पार्छन् ।
नासिरका बुबा १८ वर्षका हुँदा कोलकाताबाट नेपाल आए । नेपालमै घरजम गरे । नासिर क्षेत्रपाटीमा जन्मिए, जेपी स्कुलमा पढे । ०३८ तिर अफिसबाट घर फर्कंदा उनी कुकुरलाई बिस्कुट, पाउरोटी ल्याएर खुवाउँथे । नासिरलाई यो काम रमाइलो लाग्न थाल्यो । माया बढ्दै गयो, टोले–कुकुरप्रति ।
वरिपरिका मानिस सधैँ गाली मात्रै गर्ने, कुकुर पूजाको दिन मात्रै बाउलाई भन्दा बढी मान्ने । मान्छेको बदलिएको व्यवहार उनलाई मन परेन । सकेजति कुकुरलाई आफैँ पाल्न थाले । उनको काममा पत्नी सुलोचनाले साथ दिइन् । अन्तर्जातीय बिहे गरेका नासिर भन्छन्, “श्रीमतीको साथ नभएको भए यो काम कहाँ गर्न सक्थे र ?”
नासिरजस्तै छिन्, कुपन्डोलकी इन्दु महर्जन, ४८ । भूकम्पले घर भत्किएपछि ग्यारेजमा बस्दै आएकी इन्दुकहाँ २० कुकुर छन्, परिवारका सदस्य भने चार जना । बिहान ७ बजे पसेपछि ११ बजेपछि मात्र भान्साबाट इन्दुले फुर्सद पाउँछिन् । आफ्ना कुकुरलाई दुई समय खाना खुवाउनुका साथै टोले–कुकुरलाई खुवाउन सधैँ दिउँसो युएन पार्क जान्छिन् । उनले प्रतिदिन ५५ कुकुरलाई खाना खुवाउँछिन् ।
इन्दुले धेरै कुकुर पाल्न थालेको १४ वर्ष भयो । कुकुरप्रेमी त उनी बाल्यकालदेखि नै थिइन् । करिब ८ वर्षकी हुँदा थानकोटबाट मामाघर सतुंगल गएकी थिइन् । मामाघर पुगेर केही बेर बसेकी मात्र थिइन्, कुकुरको झगडाको आवाज सुनिन् । अरूले मतलब गरेनन् तर उनी बाहिर निस्किइन् । सम्झिन्छिन्, “घरअगाडि ठूलो भीड थियो । गएर हेर्दा आफ्नै कुकुर पो परेछ । म त खुब रोएँ ।”
टोलका ठूला कुकुरले आएर टोकेपछि घाइते भएको थियो, इन्दुको कुकुर । कुकुरलाई घाउ लाग्दा रोएको भनेर उनलाई सबैले गिज्याए । कुकुरप्रतिको लगावलाई सबैले सामान्य मान्छन् तर मान्छेले कुकुरप्रति देखाएको प्रेममा कोही किन अचम्मित हुन्छन् ?
इन्दुसँग कुकुरप्रेमबारे कति धेरै किस्सा छन् भने पूरै दिन सुनेर बसे पनि सकिँदैनन् । केही समयअघि आफ्नो प्रिय जर्मन सेफर्ड कुकुर अक्सा हराएपछि इन्दु खोज्न हिँडिन् । अक्सा त्यही कुकुरको प्रतिरूप हो, जुन दुइटा कुकुरसँगै जुधेको देखेपछि हृदयघात भएर मर्‍यो । उसको मृत्युमा अहिलेसम्म पनि परिवार शोकाकुल छ ।
नयाँ अक्सा खोज्न जाँदा इन्दु रातको अँध्यारोमा पर्खालबाट लडिन् । तैपनि चार दिनसम्म कुकुर नभेटिँदा उनको मन कुँडियो । अन्ततः उनका पति रामले नजिकैको ग्यारेजमा काम परेर जाँदा अक्सालाई चिसो भुइँमा सिक्री लगाएर बाँधेको भेटेछन् । भन्छिन्, “मैले त कुकुर चोर भनिदिएँ । त्यस्तो चिसो भुइँमा राख्ने हो त ? त्यो पनि सिक्रीले बाँधेर ।”
कुकुरको मायामा सीमित छैन, इन्दुको जनावरप्रेम । एक दिन फर्पिङमा बिराला बासस्थान नभएर विचल्लीमा परेको थाहा पाएपछि इन्दु र उनका साथी फर्पिङ गए । चार वटा बिराला बोकेर ल्याए । कति साना बच्चा, मायै लाग्ने । भर्खर पाएको बच्चालाई कसरी छाड्नू ?
समाजको एउटा हिस्सा बनिसकेको छ, कुकुर । चाहे मानिसले घरमै पालून् या सडकमा छाडून् । गाउँमा घरको सुरक्षा गर्न कुकुर पाल्छन् । सहरमा मनोरन्जन र सोखका लागि पनि कुकुर पाल्ने चलन छ । कतिपय एक्ला मानिस साथी र सुरक्षाका लागि कुकुर पाल्ने गर्छन् ।
अमेरिकन हर्ट एसोसिएसनले गरेको एक अध्ययनअनुसार कुकुर पाल्ने मान्छेमा मुटु रोग, हृदयाघात, डिप्रेसन र तनावको सम्भावना कम हुन्छ । हुन पनि अफिसबाट थाकेर आउँदा घरको गेट खोल्नासाथ कुकुर उफ्रीउफ्री मान्छेको काँध चढ्न खोज्छ । मायाले लुटुपुटु गरी मानिसलाई चाट्ने गर्छ । खाना ल्याउँदा पुच्छर नचाउँछ । कुकुरसँगको यस्तो पल कसलाई मन पर्दैन होला ? अझ कोही नचिनेको आए, भुकिदिन्छ– भौ भौ... ।
कमलादी मन्दिर प्रवेशद्वार अगाडि ठूलो साइनबोर्डमा लेखिएको छ– ‘गणेश पनि जनावर, हनुमान पनि जनावर, कुकुर पनि भैरव नै हो तर कुकुरलाई चाहिँ किन अपहेलना ? म सडक–कुकुर ।’ उक्त बोर्ड कुकुरप्रेमी आमा उपनामले चिनिने ज्ञानु देउलाले बनाएकी थिइन् ।
ज्ञानु ०७२ मा बितेपछि कुकुरको स्याहार उनकै छोरा धर्म देउला, ३७, ले गरे । अहिले धर्मसँग २१ कुकुर छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा स्विमिङ ट्रेनरका रूपमा कार्यरत धर्मसँग आफ्नो कुनै सम्पत्ति छैन । सेतो मच्छिन्द्रनाथका पालेसमेत रहेका उनी त्यही मन्दिरको गुठीको घरमा बस्छन् । भन्छन्, “सुरक्षा सबैलाई चाहिएको छ तर सुरक्षा दिने कुकुरलाई व्यवस्थित गरी राखौँ भन्दा कोही अघि सर्दैनन् । उल्टो निक्लेर जा भन्छन् ।”
कुकुरका लागि केही गर्न चाहन्छन्, धर्म । तर सोचेजस्तो गर्न सकेका छैनन् । धर्मको जस्तै भोगाइ छ, बालकुमारीका भक्त महर्जनको । सडक–कुकुरको उद्धार एवं उपचार गराउने भक्त मानिसले सडकमा कुकुरलाई घृणा गरेको देख्दा मन दुखाउँछन् । सडक दुर्घटनामा परेका कुकुरको उपचारका लागि दौडिने भक्त गैरसरकारी संस्थाको द्वैध चरित्रबाट निराश छन् । भन्छन्, “कति संस्थाहरू विदेशीका लागि तुरुन्त काम गर्छन् । हामीले बिरामी कुकुर लैजाँदा सामान्य पट्टी मात्र गरेर फर्काउँछन् ।”
पाटनको एउटा कुकुर मरेको नराम्रो अनुभूति छ, भक्तसँग । कुकुरको टाउकोमा प्वाल परेको थियो । अप्रेसन गर्नुपर्थ्यो । “हामीले खबर गर्दा संस्था मानेन । पछि विदेशीले भनेपछि तुरुन्तै उपचार त गर्‍यो तर ढिलो भएकाले कुकुर मर्‍यो,” उनी दिक्क मान्छन् ।
अहिले गर्मीको समय छ । सहरका ठाउँ–ठाउँमा पानीको जार र जग राखेको भेटिन्छ । तिर्खा लाग्दा मान्छेले मागेर पानी पिउन सक्छ तर जनावरले सक्दैन । अधिकांश ठाउँमा कुकुर या अन्य जनावरका लागि पिउने पानी राखिदिने चलन शून्यजस्तै छ । आफैँले पाले भने राख्छन्, नत्र ठन्डाराम ।
रजनी व्यञ्जनकार घरमा पालेका कुकुरका साथ
च्यासलकी रजनी व्यञ्जनकार, ३६, लाई मान्छेको अविवेकीपन मन पर्दैन । रजनीले केही समय अगाडिको घटना सुनाउँदै भनिन्, “वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर अगाडि कुकुर निन्याउरो परेर बसिरहेको थियो । भोक लाग्यो होला भनेर बिस्कुट दिँदा खाएन । अनि बोतलमा पानी किनेँ । पानी खुवाउने भाँडा माग्दा पनि पसलेले दिएनन् । त्यही पानीको बोतल काटेर पिउने भाँडो बनाएँ । कुकुर धेरै तिर्खाएको रहेछ, पूरै पानी पियो ।”
रजनीसँग घरमा शेरु, वीरु, बडी, ह्यापीसहित ८ कुकुर बस्छन् । करिब १२ वर्षदेखि उनी बाटोका घाइते, कमजोर कुकुरलाई घरमा ल्याइरहेकी छिन् । खाना र उपचारसहित मोटो र राम्रो बनाएर अरू कुकुरप्रेमीलाई पाल्न फेसबुकमा आग्रह गर्छिन् । रजनीले यसैगरी ५५ कुकुर पशुप्रेमीलाई सुम्पिसकेकी छन् ।
कुकुरका लागि झैझगडा
नासिरले कुकुरकै लागि पटक–पटक झगडा गरेका छन् । करिब दुई वर्षअघि अप्रेसन गरेर भर्खर ल्याएको कुकुरलाई नासिर बाहिर पेटीमा भात खुवाउँदै थिए । अप्रेसन गरेको कुकुरलाई कसैले लात्ताले हानेपछि उनलाई रिस उठ्यो । बिहे भोजबाट फर्किरहेको समूहसँग भनाभन भयो । र, स्थिति हात हालाहालसम्म पुग्यो । कुकुर भुक्न थालेपछि त्यो समूह आत्तिएर भाग्यो । एकछिनपछि भीडसहित मानिस लिएर झगडा गर्न आयो । भन्छन्, “धन्न, स्थानीय नेता आएर कुरा मिलाए ।”
कुकुरका लागि इन्दुले पनि पटक–पटक झगडा गरेको बताउँछिन् । पानी परेका बेला कुकुर पसल अगाडि सुतिरहेको थियो, एक महिलाले लठ्ठीले हानिन् । ती महिलाले पहिले पनि यस्तो गरेकाले उनी कराइन्, “तपाईंकै खुट्टा भाँच्नुपर्‍यो कि क्या हो, कति पिटेको ?”
यति धेरै सास्ती पाए पनि इन्दु, नासिर, धर्म, भक्तहरू कुकुरलाई आफ्नै सन्तानजस्तै हेरचाह गर्छन् । कुकुरकै कारण छरछिमेकीसँग झगडा गरिरहन्छन् । आखिर यो कुकुरमोह किन ? नासिर भन्छन्, “लतजस्तै भइसक्यो कुकुरप्रतिको माया । अब मरेपछि मात्र छुट्ला ।” यदि नासिरले भनेजस्तै जनावरप्रेम लत हो भने यस्तो बानी सबैलाई सधैँ लागोस् ।
कुकुरलाई माया गर्नेमा नेपाली पनि कम छैनन् । गायक प्रवीण वज्राचार्यले २ वर्षअघि ‘हे मानव फिट हाचिको’ (एडप्टेड स्ट्रिट डग) बारे गीत गाए । मान्छेले कुकुरप्रति गर्ने दुर्व्यवहार हटाउन र चेतना फैलाउन गीत गाएको प्रवीण बताउँछन् । भिडियोमा देखेको कुकुरलाई उनले ३ महिना तालिम दिएर म्युजिक भिडियोमा खेलाएका थिए ।
प्रवीणका अनुसार पहिलेभन्दा अहिले सडकका कुकुरप्रति राम्रो व्यवहार गरे पनि समग्रमा अवस्था नाजुक छ । भन्छन्, “यो सब एनजीओको देखाउने दाँत भएको छ । कुकुरको अवस्था राम्रो भएको बताउने एनजीओ नै हुन् । यदि राम्रो भएको भए अहिलेसम्म फुटपाथमा एउटै कुकुर नहुनुपर्ने ।”
अधिकांश कुकुरप्रेमी ब्रिड कुकुर मन पराउँछन् भन्ने विश्वास छ । प्रवीण त्यसलाई नकार्छन् । ब्रिड गैरसरकारी संस्थाले भन्ने गरेर हो । भन्छन्, “नत्र कुकुरको माया लाग्नेलाई ब्रिड होस् कि ननब्रिड, के मतलब !”
शंकै छैन, कुकुर इमानदार जनावर हो । मान्छेका हूलमा पनि आनन्दले बस्न सक्नु कुकुरको अर्को विशेषता हो । प्रवीणका अनुसार कुकुरले बाँच्नका लागि गरेको संघर्षबाट मान्छेले पाठ सिक्नुपर्छ ।
कुकुरलाई माया गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ राख्छन्, विवेकरत्न शाक्य, २० । यसका लागि उनले साथीसँग मिलेर डग लभर नेपाल फेसबुक पेज नै बनाएका छन् । थोरै समयमै पेजले २.७ के लाइक पाएको छ । पेजको प्रयोग अधिकांश कुकुर हराएको सूचना राख्न र पाएको खबर दिन उपयोग भएको छ । साथै, फुटपाथमा छाडिएका कुकुरलाई पाल्न फेसबुक पोस्ट सेयर गर्ने गरेका छन् । विवेक भन्छन्, “सडकका कुकुरलाई पाल्न लगाउनु ठूलो चुनौती हो ।”
कुकुरको पनि नेता
मान्छेजस्तै कुकुरको स्वभाव पनि भिन्नभिन्न हुन्छ । कोही मासु मात्र मन पराउँछन् भने कोही मासु–भात । कुकुरको पहिलो महिला प्रशिक्षक सुस्मिता रञ्जित प्रजातिअनुसार कुकुरको स्वभाव फरक हुने बताउँछिन् । उनका अनुसार जर्मन सेफर्ड कुकुर आफ्नो मालिकप्रति बढी नै इमानदार हुन्छ, पूरै परिवारलाई सुरक्षा दिन खोज्छ भने फ्रेन्च मास्टिफ डग एक जनाले भनेको मात्र टेर्छ ।
सडकका कुकुर प्रायः मायालु हुने सुस्मिताको अनुभव छ । भन्छिन्, “माया गर्नेबित्तिकै लोलोपोतो भई काखमा आउँछन् । कुनै भने रिसाउने खाले हुन्छन् । खानुपर्दा नजिक आउने नत्र घुरेर बस्ने, रिसाउने हुन्छन् ।” प्रायः कुकुरको समूह नेता हुने गर्छ । त्यही नेता कुकुरले पूरै समूहलाई नियन्त्रणमा राख्छ ।
बैंककमा कुकुर प्रशिक्षण तालिम लिएकी सुस्मिताले विदेशमा सडक–कुकुर देखिनन् । त्यहाँ कुकुरलाई आफ्नो सन्तान जसरी पालिन्छ । सुनाउँछिन्, “म दुबई पनि घुमेँ । तर दुवै ठाउँका सडकमा कुकुर थिएनन् । त्यहाँ फुटपाथका कुकुरलाई स्थानीयले लिइहाल्छन् । हरेक कुकुरमा माइक्रो चिप हालिएको हुन्छ । केही भयो भने त्यसलाई नै जीपीएबाट ट्र्याक गरी समात्छन् ।”
सुस्मिताले कुकुरलाई रङ लगाउने, कपाल काट्ने, नङ काट्नुका साथै दिसा–पिसाब गर्न, खाना खान, नमस्ते गर्न पनि सिकाउँछिन् । अहिलेसम्म उनले ५० भन्दा बढी कुकुरलाई तालिम दिइसकेकी छन् । कुनै कुकुरले ३० दिनमै सिकिसक्छन् भने कुनैले ३ महिनै लगाउँछन् ।
आवरण : आश्रित कुकुरसँग रैना व्यञ्जनकार, कुपन्डोल, तस्बिरहरू : रवि मानन्धर
साथमा यो पनि पढ्नुहोस् :तेस्रो पुस्तासँग रमाउँदै
ट्याग: आवरणकुकर प्रेम